ओपो F19 प्रो अब मात्र ३५ हजार ९९० मा « Canada Nepal
काठमाडौं – ओपोको F सिरिज युवा ट्रेन्ड सेटरहरुबीचको उच्चतम रोजाईको रुपमा पर्न सफल मानिन्छ । यस सिरिजले तिनीहरुको जीवन र काममा महत्वकांक्षाहरु बढाउन मद्दत गर्दछ । तिनीहरुको व्यक्तिगत शैलीलाई पनि प्रतिनिधित्व गर्दछ । यसले आफ्ना प्रयोगकर्ताहरुमा नयाँ प्रविधि र भिडियो क्याप्चरिङ सुविधाहरुको साथमा रचनात्मकतालाई बाहिर ल्याउन मद्दत गरेको छ ।
ँज्ञढ प्रो ओपोको पहिलो प्रिमियम स्मार्टफोन हो । जसले नवीन प्रवृतिहरुलाई मूर्तरुप दिन्छ र रमाइलो पलहरु खिच्न सकिन्छ । ँज्ञढ प्रोसँग यसका डिजाइन र प्रविधिसँगै ट्रेन्ड सेटरहरुका बीचमा ३० वाट ख्इइऋ फ्लास चार्ज ४.० प्रविधि, ऋययिचइक् ज्ञज्ञ।ज्ञ जसले दैनिक कार्य क्षमतालाई बढाउनका साथै बिना कुनै रोकावट दिनभरीको कार्य सम्पादनमा मद्दत पुर्‍याउँछ ।
यसबाहेक, F19 प्रोले अझ शक्तिशाली र प्राकृतिक देखिने भिडियोहरु खिच्दछ । जेनेरेसन अपग्रेडका साथ आएको यो फोनमा एआई कलर पोट्र्रेट भिडियो र डुअल भ्यु भिडियोका साथ एआई सञ्चालित पोट्र्रेट फोटोग्राफीको सुविधा छ । जसले उत्कृष्ट भिडियो खिच्न सक्षम बनाउँछ ।
F19 प्रो ४८ एमपी क्वाड क्यामेराको साथ फोटो र भिडियोहरुमा गहिराइ थप्नका लागि ८ एमपी अल्ट्रा वाइड एंगल क्यामेरा, २ एमपी म्याक्रो क्यामेरा २ एमपी मोनो क्यामेराको साथ तालमेलमा काम गर्दछ । निःसन्देह, प्रयोगकर्ताहरुको लागि सेल्फी उत्तिकै महत्वपूणर् भएकाले फोनमा ३२ एमपी फ्रन्ट फेसिङ क्यामेरा पनि रहेको छ ।
F सिरिज अल्ट्रा स्लिम डिजाइनका लागि प्रख्यात छ र F19 प्रोमा पनि यो विशेषता रहेको छ । F19 प्रोका प्रयोगकर्ताहरुले ७.८mm अल्ट्रा स्लिम बडी मात्र नभई 172g weigh र थ्रीडी ब्याट्री कभरको अनुभव लिन सक्ने छन् । ओपो F19 प्रो पछिल्लो रु. ३९,९९०/- मा रु. ४००० वचतका साथ अब मात्र रु. ३५,९९०/- मा बजारमा उपलब्ध छ ।
पहिलेको मूल्य रु.३९,९९०/-
नयाँ मूल्य अब मात्र रु.३५,९९०/-
प्रकाशित मिति : बैशाख २०, २०७९ मंगलबार २ : ३३ बजे